झण्डै दुइ करोडले हेरिसकेको भिडियोमा यी युवतीले के गर्दैछिन ? पत्ता लगाउनुहोस। – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > झण्डै दुइ करोडले हेरिसकेको भिडियोमा यी युवतीले के गर्दैछिन ? पत्ता लगाउनुहोस।
झण्डै दुइ करोडले हेरिसकेको भिडियोमा यी युवतीले के गर्दैछिन ? पत्ता लगाउनुहोस।
admin August 30, 2020 August 30, 2020 जीवनशैली, रोचक, समाज	0
निकै नै सुन्दर एक युवतीको बाथरुम भिडियो संसारभर भाइरल बनेको छ । ति युवतीले बाथरुममा छिरेपछि के-के गरिन्, त्यो सबै एक गोप्य क्यामेरामा कैद गरिएको थियो ।
एक युवती बाथरुममा प्रवेश गर्छिन् । ढोका बन्द गर्छिन् । त्यसपछि पालैसँग तल-माथिको दुवै कपडा खोलेर झुण्ड्याउँछिन् । अब उनको शरीरमा ब्ल्याक वान पिस ड्रेस मात्र बाँकी रहन्छ । त्यो पनि खोल्न लागेजस्तो गर्छिन् ।
त्यत्तिकैमा उनले एक्कासी क्यामेरामा हेरेर भन्छिन्, ‘तपाईं मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नि होइन ? सायद केहीको प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईं जे का लागि प्रतिक्षा गर्नुभएको हो, त्यो नहुँदासम्म कुर्नुहुन्छ नि होइन ?
तर त्यो हुँदैन । केही हुँदैन । सबैभन्दा पहिले म यो ट्याब (धारो) बन्द गर्छु । यहाँ पानी खेर गइरहेको छ ।’ अनि उनले पानी खेर गइरहेको धारो बन्द गर्छिन् । जनचेतना फैलाउने उनको यो शैली गज्जबको छ ।
पानी मानिसका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । यसले व्यर्थमा खेर जान दिनु हुँदैन भन्ने सन्देश यो जनचेतनामूल भिडियोले दिन खोजेको छ ।
इजरायल जान चहाने नर्सहरूका लागि ३ महिनामा यस्तो अवसर!
कोरोना भाइरस: यस्ता थिए दुई हजार वर्षमा नेपालमा आएका महामारी
खुशी र सुखी हुन अपनाउनुहाेस् यी १० सूत्र! तपाइँ कहिल्यै दुःखी हुनुपर्दैन्, जानी राखौं
नारायणगढमा भेटिएका मनकारी प्रहरी, जस्ले पैदलयात्रीलाई यसरी सहयोग गरेपछि भाइरल!
जब प्रश्नमा जवाफ दिन खोज्दै गर्दा अभिभावक संस्थाको परिसरमा भक्कानिइन् पूजा!